နောက်ဆုံး ထွက် Vivo S စီးရီး ဒီဇင်ဘာ မှာ ထွက် မည် - Pandaily
Dec 08, 2021, 17:13ညနေ 2021/12/09 00:47:27 Pandaily
နွေ ဦး ပွဲတော် နီးကပ် လာသည်နှင့်အမျှ နောက်ဆုံးပေါ် vivo S lineup သည် ရာသီ ကို စော စီး စွာ စတင်ခဲ့သည်။ Weibo သတင်းပေး အဆိုအရ@ Digital Chat Stationကိရိယာ အသစ် ၏အတွင်းပိုင်း ကုဒ်နံပါတ် “Superman” ကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖြန့်ချိ မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
အရင္က vivo S series မွာ ေရွ႕ ကင္မရာ နဲ႔ selfie ကို အဓိကထား ႐ိုက္ကူး ထားၿပီး ဖက္ရွင္ က်က် ပံုစံ နဲ႔ ႐ိုက္ကူး ထားတာပါ။ Breaker ၏အဆိုအရ အတွင်းပိုင်း ကုဒ်နံပါတ် သည် “Superman” ပိုမို ခက်ခဲ လာပြီး vivo S စီးရီး များ၏ တည် နေရာနှင့် ထုတ်ကုန် စွမ်းအား သည်ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှု များဖြစ်ပေါ် လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Selfie အတွက် ရှေ့ ကင်မရာ ဟာ vivo S series ရဲ့ အဓိက နေရာ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Vivo S စီးရီး ကင်မရာ များ၏ မျိုးဆက် တို င်းသည် အရေပြား ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ကိုတိုးမြှင့် ရန် AI algorithm ကိုအသုံးပြုခြင်း မှသည် မူရင်း ပုံရိပ် ဖိုင်များကို ပြုပြင်ခြင်း အထိ၊ micro-slit fill lighting မှသည် သဘာဝ အလှအပ သဘောတရား ကိုသဘောပေါက် ခြင်း အထိ စက်မှုလုပ်ငန်း ကိုဆက်လက် ဦး ဆောင် နေသည်။
ဒါ့အပြင် ဖုန်း ရဲ့ ပေါ့ပါး ပြီး ကြော့ရှင်း တဲ့ အသွင်အပြင် ကလည်း vivo S series ရဲ့ “core competitive” feature တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Vivo S5 ၏ “Geometric Diamond Aesthetics” မှ vivo S9 ၏ ကိုး ရောင် gradient ကိုယ်ထည် အထိ နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်း လုပ်ငန်း နယ်ပယ် ရှိ vivo S10 ၏ “photochromic” လုပ်ငန်းစဉ် ကိုပထမဆုံး အကြီးစား အသုံးချ ခြင်း အထိ vivo S စီးရီး များသည် လူငယ် အသုံးပြု သူများက အလွန် ကောင်းသော ကင်မရာ နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော အသွင်အပြင် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံခဲ့ရသည်။
ဘလော့ ဂါ တွေရဲ့ သတင်း တွေအရ vivo S12 နဲ့ S12 Pro တို့မှာ OriginOS Marine စနစ် သစ် ပါဝင်လာ မှာဖြစ်ပြီး 44W fast charging ကို ထောက်ပံ့ ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ IQOO Neo5se နဲ႔ iQOO Neo5s တို႔မွာ Snapdragon 778G, Dimensity 1200 နဲ႔ Snapdragon 888 platform ေတြကိုလည္း အသံုးျပဳ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Vivo S12 Pro မွာ notch ပါတဲ့ FHD + OLED high brush curved front screen, 50MP dual front camera, 108MP matrix type triple front camera, Dimensity 1200 processor, pre-installed OriginOS Marine system ကို ထည့္သြင္း ထားပါတယ္။ ဒီ ဖုန္း ဟာ အျခား စမတ္ဖုန္း ေတြျဖစ္တဲ့ Honor 60 Series လို ေစ်းႏႈန္း ယြမ္ ၃၀၀၀ နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရမွာပါ။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Vivo အနေနဲ့ Snapdragon 870 ပါတဲ့ တက်ဘလက် ထုတ်ကုန် တွေကို မိတ်ဆက် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်
CAICT (China Information and Communication Technology Research Institute) မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မေ လအထိ ပြည်တွင်း စမတ်ဖုန်း တင်ပို့ ရောင်းချ မှုသည် ယူနစ် ၁၄၈ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ၁၉. ၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။ 5G စမတ်ဖုန်း တင်ပို့ ရောင်းချ မှုသည် ယူနစ် ၁၀၈ သန်း ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် တိုးတက် မှုမှာ ၁၃၄. ၄% ဖြစ်သည်။ သိသိသာသာ တိုး
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စမတ်ဖုန်း တင်ပို့ ရောင်းချ မှု တိုးတက်မှု ကျဆင်းလာ ခြင်းနှင့်အတူ တရုတ်၏ 5G စမတ်ဖုန်း များသည် ပေါက်ကွဲမှု ကြီးထွား လာသည်။ ထို့အပြင် ချစ်ပ် ရှားပါး မှု နှင့်အခြား ဦး ဆောင် အမှတ်တံဆိပ် များမ ရှိခြင်း သည်လည်း မသေချာမရေရာ မှု အချို့ ကိုဖြစ်ပေါ် စေသည် ထို့ကြောင့် စမတ်ဖုန်း စျေးကွက် ၏ဖွဲ့စည်းပုံ ကို လက်ရှိတွင် ပြန်လည် ရေးဆွဲ နေသည်။ ထိပ်တန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များအကြား အငြင်းပွားမှု များအပြင် အလယ်အလတ် မှ အဆင့်မြင့် စျေးနှုန်း ယွမ် ၂၅၀၀ မှ ၃၅၀၀ ယွမ် သည် ပြည်တွင်း စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ် များ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု ဖြစ်လာသည်။
Transsion လက်အောက်ခံ TECNO သည် ရောင်စုံ photoisomer နည်းပညာ ကိုမိတ်ဆက် ခဲ့သည်
TECNO ဟာ သူ့ရဲ့ multicolor photoisomer နည်းပညာကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြသ ခဲ့ပြီး စမတ်ဖုန်း ရဲ့ monochrome back cover ကို အလင်းရောင် အောက်မှာ အရောင် အမျိုးမျိုး ကိုပြသ နိုင်အောင် အောင်မြင် ခဲ့ပါတယ်။
Gadgets Feb 10 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 10, 2022